Ka eeg isku-duwaha UTM ee Khariidadaha Google, oo isticmaalaya wax! Nidaam kale oo isuduwid ah - Gofumed
Luulyo, 2012 Cartografia, tabo cusub, aragti ugu horeysay
Ilaa hadda waxay ahayd mid caadi ah fiiri UTM iyo isku-duwidda juquraafi ee Khariidadaha Google. Laakiin sida caadiga ah hayaqaashka Google ee taageeraya kaas oo ah WGS84.
Maxaa dhacaya haddii aan rabno in aan ku aragno Khariidadaha Google, isuduwaha Colombia ee MAGNA-SIRGAS, WGS72 ama PSAD69?
Iskuduwaha Spain ee ETRF89, Madrid 1870 ama xataa REGCAN 95?
Iyo sidee ku saabsan xidhiidhka Mexico ee GRS 1980 ama International 1924?
Dhowr maalmood ka hor waxaa jira nidaam u ogolaanaya inaad taas samayso, waana PlexScape WebServices. Laga soo bilaabo saaxiibo Giriiga abuurayaasha ee Plex.Earth, kaas oo isku dhafan xogta Google Earth iyo AutoCAD, taas oo habka ay hadda u sameyneyso mid aad u sigaar cabbaya AutoCAD 2013 kaasoo beddelay xeerarka ciyaarta.
Adeegga PlexScape wuxuu ku taageeri karaa wax aan ka yareyn 3,000 nidaamyada isku xirka iyo 400 Datums, kuwa isku midka ah ee taageera Plex.Earth.
Aan aragno imtixaan: isku day inaad sharaxdo talaabo talaabo ah sababtoo ah si daacad ah udunka ah ma aha mid aad u jilicsan marka hore:
Hadda waxaan ku jiraa Bogotá waxaanan xiiseynayaa inaan arko farqiga u dhaxeeya iskuxirka WGS84 iyo SIRGAS:
Waa hagaag, u maleynayaa inaan ahay agagaarka Sare, sida ku cad khariidada:
Adeegyada 'PlexScape Web Services', waxay hadda leeyihiin saddex adeegyo: Mid ka mid ah waa sahal sahlan oo lagu ogaanayo isku-duwaha dhibic (Isku-dubbarididda Socdaalka), mid kale oo dhibco khariidad ku dhajiya oo u dhoofiya kml / txt (Furaha Digitizer) kan kale waa kan aan hadda isticmaali doono, loo yaqaan Isku Bedel Iskuduwaha.
1 Dooro Nidaamka Asalka
Taasna waxaan ku dooranaynaa tabeelka dhinaca bidix, waddanka aan daneyneyno. Xaaladdan oo kale Colombia, oo mar la soo xulay waxaanu tusi doonaa WGS84 sida Datum ee xiisaha.
Intee u dhaxaysa lakabada / lakabada iyo dariska / Gawaarida waxaa ka jira fursado xulasho kala duwan. In la riyaaqo in ay ku xiran yihiin waddanka sababtoo ah waxay noqon doontaa waali ah inay iyaga ka raadiyaan kuwa badan oo nidaamku taageerayo.
2 Goobta asalka ah
Tan darteed, annagoo ka muuqda khariidadda aagga danaha noogu jirta, waxaan ku dul soconnaa astaanta hoose oo aan doorannaa «Keen calaamadee khariidada«, Tan waxaa lagu tusi doonaa barta xiisaha ee khariidada. Ka dib waxaan u jiideynaa meesha saxda ah ee aan rabno inaan ku aragno. Isla sidaas ayaa lagu samayn karaa tabsyada sare, laakiin waxay umuuqataa waxbadan oo wax ku ool ah in laga sameeyo astaanta waxaanan tusi doonaa jimicsiga oo dhan.
Haddii aan rabno inaan ogaano iskuduwaha qodobka halka aan ku helnay, markaa waxaan u dhowaannaa astaamaha oo aan dooranayaa «Ka hel isku-duwayaasha ka soo-digaha«, Iyadoo tan lagu muujiyo golaheenna isku-duwaha ayaa la soo bandhigi doonaa.
Hadday tahay waxaan rabno inaan dhigno iskuduwaha gaar ah, ka dibna waxaan ku qornaa golaha oo aan dul dhigno calaamada aan dooranay «Tijaabi sumadeeye si isku duwo«, Taasna waxay ku tusaysaa isuduwaha danaha inaga quseeya.
3 Eeg Iskuduwaha UTM
Si aad u ogaato isku-duwayaasha UTM ee qodobkan, waxaan tilmaami doonaa aagga tixraaca. Haddii aan shaki ku jirin waxaan dooran karnaa mid ka mid ah, iyo ikhtiyaarka «Muuji xuduudaha»Meesha lagu calaamadeeyay buluug ayaa muuqata. Caawinaad weyn, xusuusnow taas Colombia ma aha oo kaliya inay ku dhacdo aagagga 17 Waqooyiga, 18 Waqooyiga iyo 19 Waqooyiga laakiin sidoo kale isku mid ah, laakiin koonfurta tan iyo markii uu waddanku ka soo galo Ecuador iyo waxa ku dhacaya lix aag. Sidaa awgeed, waxay qabsadeen nidaamkooda u gooni ah ee gobollada oo sii adkeeya noloshooda.
Xaaladdan oo kale, waxaan dooranay UTM Zone 18 N oo kaddib, waxaan aragnaa in ay jirto dhibicdayada.
3 U dhexdhexaad dhinaca qaybta bidix dhinaca midig
Ilaa hadda, waxa aan aragno waa sida loo muujiyo xiriirinta UTM ee Khariidadaha Google. Laakiin waxaan xiiseyneynaa in aan aragno iskudubar isku mid ah nidaam kale oo isuduwid ah, oo loogu talagalay kiiska MAGNA-SIRGAS. Ugu horreyn, waxaan isticmaalnaa fallaadhaha cagaaran si aan u muujinno in iskudhafyada isku midka ah laga soocayo dhinaca bidix dhinaca dhinaca midig. Tani waxaa lagu sameeyaa guji iyo waxa noo xiiso leh waa labada dhinacba waa siman yihiin.
Hadda si aan u dhaqdhaqaaqno tilmaamaha saxda ah, waxaan sameyneynaa isku mid: Waxaan kor u qaadeynaa sumadda, oo waxaan doortaa «Keen calaamadee khariidada«. Hadday meel kale ka dhacdo, waxaan raadinaa goobta mar labaad oo waxaan tilmaamnaa «Calaamadeeyaha u wareeji xarunta dhexe»Iyo inuu is waafajiyo isku duwaha«Tijaabi sumadeeye si isku duwo«.
Calaamad muujinaysa in wax kasta ay wanaagsan yihiin, waa in calaamadda buluugga ah waa inay ahaataa mid isku mid ah calaamadda brown haddii nidaamka isuduwidu isku mid yahay labada. Waxay leedahay qulqulo, laakiin way shaqeysaa.
4 Ogow isku xirka WGS84 ee SIRGAS
Taas awgeed waxaan uga beddelanaa WGS84 oo loo beddelaa SIRGAS qeybta midig. Ka dibna waxaan ku dajinaynaa astaamaha oo dhahnay «Ka hel isku-duwayaasha ka soo-digaha«, Markaa waxaan helnaa iskuduwaha qodobka aan horay u haysanay laakiin nidaamka kale. U fiirso in lat / lon isku duwaha ayaa isku mid ah, taasina waa in SIRGAS uu ku saleysan yahay WGS84.
Laakiin haddii aan eegno waxa ka dhacaya cutubyada UTM, isku-duwaha X waxay ka duwan yihiin Saacadaha 3 iyo isku-duwaha Y ee mitir kale. Taasina waa sababta loo sheegi karo in labada nidaam isku mid yihiin. Marka aynu dhaqaaqno, farqigaas wuxuu isbeddelaa millimitir. Waxaan caddaynayaa in tani ay tahay iyada oo la raacayo xuduudaha adeegga PlexScape Web Services, wax waliba waa in la soo wargeliyaa maxaa yeelay waxay igu dhacday dhowr jeer ka hor.
5 Ogow isku-duwaha PSAD
Waxaan dooran karnaa nidaam kale, waxaan kaloo codsan karnaa in xiriiriyaha lagu soo celiyo «Ka hel isku-duwayaasha ka soo-digaha«. Tilmaamahu waa inuusan dhaqaaqin, sababtoo ah waxaan nahay isla goobtii, waxa dib noo soo celinaya waa isku-duubnaan nidaam kale ah. Xaaladdan oo kale, gudaha PSAD 1956 isla dhibicdan waxay leedahay isku-duwayaasha X = 604210.66 Y = 512981.6.
Bal ka fikir, markaa waxa aan rabno in aan aragno waa isku xirasho labada nidaam (ma aha isku dhibic), ka dib waxaan nuqul ka sameynaa isuduwaha bidix ilaa dhanka midig ka dibna «Tijaabi sumadeeye si isku duwo»Halkaasna waxaan ku haynaa. Isku-duwaha isku midka ah ee ka hooseeya, labada baloog, laakiin dhibca buluugga ah wuxuu innaga dhacaa annaga barakacay mitirrada 228 dhinaca galbeed iyo mitirrada 370 xagga koonfureed.
Ku riyaaqa qalabka adeegga shabakadda ee PlexScape. Xaqiiqadayda kaliya. Maalin kale ayaan ka hadli doonaa adeegyadeeda kale, kuwaas oo qaar ka mid ah la bixiyo, oo ay ku jiraan isbeddelkan laga bilaabo faylka leh dhibco badan.
Tag bogga Adeegyada Bogga ee PlexScape
Wax badan ka baro Isku-duwayaasha UTM
Post Previous«Previous Abuuri karo qaybaha iskutallaabta CivilCAD
Post Next Nidaamyada isdhexgalka UTM ee lagu soo bandhigay Khariidadaha GoogleNext »